Ikhaya » Amanqaku eendaba akutshanje » uhambo ngomoya » I-Samui iya ePhuket ngoku kwakhona kwi-Bangkok Airways
Airlines • uhambo ngomoya • Ukuhamba ngeshishini • iindaba • Iindaba Eziphambili zaseThailand • uthutho • Iindaba zeWired Travel
Agasti 22, 2021
I-ATR 600 Bangkok Airwars
I-Bangkok Airways Public Company Limited yinqwelomoya yenqila ese Bangkok, Thailand. Isebenza ngeenkonzo ezicwangcisiweyo ukuya kwiindawo eziseThailand, eCambodia, eChina, eHong Kong, eIndiya, eLaos, eMalaysia, eMaldives, eMyanmar, eSingapore naseVietnam. Esona siseko saso sisikhululo seenqwelomoya iSuvarnabhumi
I-Bangkok Airways ibhengeza ukuqala kwakhona kweSamui-Phuket (vv)
Ukuqala nge-25 Agasti 2021 ukubheka phambili, i-Bangkok Airways Public Company Limited iya kuphinda iqale iinkonzo zayo ngqo phakathi kweSamui nePhuket
I-Bangkok Airways iqala kwakhona le nkonzo ukulungiselela abagibeli kunye nokuxhasa iiprojekthi zokuvula iThailand eziyiPhuket Sandbox kunye neSamui Plus Model.
Iinkonzo eziqalisiweyo phakathi kweSamui nePhuket ziya kusebenza ngenqwelomoya ye-ATR72-600, eqala ngeenqwelo-moya ezintathu ngeveki (ngoMvulo, uLwesithathu, nangoLwesihlanu). Inqwelo moya ephumayo i-PG253 isuka kwisikhululo seenqwelomoya eSamui nge-11.25: 12.25hrs. kwaye ifike kwisikhululo senqwelomoya sasePhuket ngo-254hrs. Inqwelomoya engenayo i-PG13.00 isuka kwisikhululo seenqwelomoya ePhuket ngo-14.00hrs. kwaye ifike kwisikhululo seenqwelomoya i-Samui nge-XNUMXhrs.
Abakhweli abahamba besiya kwezi zixeko zibini bayacelwa ukuba bangenise isatifikethi sonyango esineziphumo zelebhu ezibonisa ukuba i-COVID-19 ayifumaneki (yenziwe yinkqubo ye-RT-PCR kwaye ayikhutswanga ngaphezulu kweeyure ezingama-72 ngaphambi kokuhamba) kunye nobungqina bokugonywa.
Ukongeza, abakhweli bayacelwa ukuba balandele ngokungqongqo izikhokelo ezikhutshwe yi-ofisi yephondo lasePhuket kunye ne-ofisi yephondo laseSur Thani, ulwazi oluthe kratya malunga neemfuno lungajongwa https://www.gophuget.com kwaye https://healthpass.smartsamui.com
Ngapha koko, inqwelomoya inqwenela ukwandisa ukunqunyanyiswa okwethutyana kwenkonzo yokutya ngenqwelomoya kunye nokuvalwa okwethutyana kweendawo zokuphumla zabakhweli kude kufike esinye isaziso.
I-WTM yaseLondon ivuliwe: Iyakhulula okanye iyoyikisa?
Tyala, iMali kunye nokuQalisa kwakhona: Utyalo-mali loKhenketho...
Ukuhamba ngololiwe okuyingozi ngabakhenkethi- Ngaba kukho ...
Aha: Inqwelo moya entsha yaseNevada eseReno-Tahoe
Stephen Asiimwe to lead Uganda Private Tourism Sector Novemba 28, 2021